DAAQADA SAMEE-ISKU-DHIRTA DAB-DEMISKA (POLYCARBONATE): SIDA LOO SAMEEYO IYO QALABKA LOO BAAHAN YAHAY, HALKAA LAGA RABO - DHISMAYAASHA
Sidee loo sameeyaa daaqada polycarbonate ee caleen si koronto leh gacmahaaga? Iyo sidoo kale ikhtiyaarrada kale ee meelaynta goobaha
Daaqad daaqad ah - naqshad lagama maarmaan ah oo lagu koriyo aqal kasta.
Iyada oo la abuurayo shuruudaha lagama maarmaanka u ah koritaanka dalagyada dhulka lagu ilaaliyo.
Maxaan ugu baahanahay duuf
Feejignow xaqiiqda ah in daaqadu ay tahay inay ku taal aqalka dhirta lagu koriyo. Si habboon u sameeyaan hawo-qaadashada ma aha oo kaliya abuuritaanka microclimate la doonayo, laakiin sidoo kale ka hortagaan muuqaalka ee cudurka, cudurada iyo bakteeriyada on landings ah.
Aad bay muhiim u tahay in daaqada si sax ah loo sameeyo. ee lagu koriyo oo laga sameeyey polycarbonate, sababtoo ah tani ma ogolaanayso hawada. Laakiin qorraxda qorraxda way ka gudubtaa, hawada kuleylaysaa. Sidaas darteed dhirta aan "gubi", samee ugu yaraan laba meelood. Haddii aqalka dhirta lagu koriyo waa weyn yahay, markaa hawadu waxay noqon kartaa wax badan.
Guryo-beereed ayaa loo isticmaalaa dalagyada beeraha inta lagu jiro xiliga qaboobaha. Naqshaduhu waxay haysaa kuleyl, waxay abuurtaa xaalado korriin dhirta. Laakiin qoyaan badan iyo heerkulka ayaa dhaawici doona dhirta beeraha.
Ventilator loo baahan yahay ee geedo adag. Iyadoo naqshadahani, waxaad ka hortageysaa istaagitaanka hawada, hoos u dhig heerka qoyaanka. Tani waa mid aad muhiim u ah tamaandhada iyo qajaarka, sababtoo ah dhaqamadaasi waxay inta badan saameynayaan cudurada fangas.
Meerayaashu waa noocyada soo socda:
farsamada caadiga ah;
si toos ah, oo leh qalab furan.
Waxaad si sahlan u sameyn kartaa qalabkaaga gaarka ah, aqoonta khaaska ah iyo qalabka qaaliga ah looma baahna.
Waxaad ka akhrin kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan heerkulku halkan.
Xulashada meeleynta valve iyo rakibidda
Xaggee bay tahay in ay ahaato hawo lagu koriyo oo lagu koriyo? Haddii aad rabto inaad ka dhigto godad ku jirta aqalka dhirta lagu koriyo ee hawada, ka dibna doortaan si taxadar leh.
Goobaha si toos ah u dhig, iyaga oo meelo kala duwan ku leh aqalka dhirta lagu koriyo.
Ka samee hal valey hoose, iyo kan kale - hoostiisa hoostiisa. Halkaan, halkan isgoyska beelaha waa goob lagu magacaabo.
Si taxadar leh u dooro meesha uu ku yaal godka. Uma baahnid inaad ka sameyso dhinaca kalehalkaas oo ay dabayshu jarto, sababtoo ah waxay keeni kartaa hoos u dhac heerka caadiga ah ee qoyaanka ee lagu koriyo. Markaad ka sameysey bareeyaha dhinaca difaaca ee dabaysha, waxaad ku ilaalin doontaa wareegga dabiiciga ah ee lagu koriyo.
Fadlan ogow in nidaamku uu wax ku ool yahay oo keliya aqalka dhirta yar. Haddii aad ku beeray dhirta dheer ee lagu koriyo, ama dhismaha laftiisu waa dherer weyn, ka dibna nooc kale oo hawo leh ayaa loo baahan yahay.
Sidee baan ku ogaanayaa in godadka lagu koriyo ah kuma filna? Iska ilaali kondensate. Haddii ay ku jirto derbiyada aqalka dhirta lagu koriyo, ka dibna aqalka dhirta lagu koriyo ayaa loo baahan yahay in la casriyeeyo. Ku rakib dariishado dheeraad ah, halkaas waxaad ku hubin doontaa in wareegga hawada ee caadiga ah ee lagu koriyo.
Si kor loogu qaado socodka hawada aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad samayn kartaa daaqado dhowr ah qaybta sare, tusaale ahaan, saqafka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si degdeg ah u buuxiso hawsha hawo-qaadashada. Waxaad rakibi kartaa laba nooc oo qalab ah.:
Automatic wuxuu kordhin doonaa tayada hawsha. Waxay iska furaan marka heerkulka gudaha aqalka dhirta lagu koriyo uu gaaro qiime go'an.
Markuu bilaabo inuu hoos u dhaco, furaha si tartiib ah ayuu xiraa. Laakiin waxaa habboon in la tixgeliyo in nidaamyada tooska ah ay aad ugu adag yihiin in la rakibo. Waxaa la aaminsan yahay in nidaamka hawadu uu si fiican u shaqeyn doono haddii daaqadaha ay ku nool yihiin ¼ of aagga aqalka dhirta lagu koriyo.
Halkan waxaad ku dooran kartaa sawirrada sawir-qaadista ee meelaynta hawada.
Maxaa qalab loo baahan yahay?
Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad u sameyso daaqada polikarbonatka daaqsinka ee gacmahaaga? Si aad u sameyso daaqada, waxaad u baahan doontaa tuunboolaha iyo nalka. Xulo kuwa leh O-ring gaar ah. Ku iibso tuubooyin leh koofiyad ballaaran. Wixii ka shaqeynaya geeska profile, isticmaal faylka.
Iibso hacksaw, si loo abuuro habdhis wax ku ool ah U-profile. Haddii aadan iibsan karin, ku dheji faashadaha leh cajalad duuban. Si aad u shaqeyso waxaad u baahan doontaa galka polycarbonate iyo mashiinka.
Xulashada xidhiidhinta sidoo kale waa mid aad u muhiim ah. Daaqadaha, isticmaal taxadarooyinka soo socda:
ku saabsan hababka loo siman yahay.
Nooca rakibida hawo-qaadista aqalka dhirta lagu koriyo lama saameeyo. Laakiin marka la rakibayo nidaamyada tooska ah, waxaa fiican inaad ka fekerto marxaladani, tani waxay ka ilaalineysaa dhibaatooyin dheeraad ah oo leh hawo qaboojinta. Xulashada habka, ku rakib hawada.
Kulanku wuxuu ka kooban yahay tallaabooyinka soo socda.:
Qayb ka mid ah darbiga. Si taxadar leh u shaqee, fiiro gaar ah u yeelo cabbirka daaqada.
Qaado sawir, adeegso caleemooyinka khafiifka ah shaqadaada marka loo eego dhinaca aqalka dhirta lagu koriyo. Iska yaree gabal. Si kor loogu qaado awoodda, ku dar culeyska ama u samee kabar adigoo isticmaalaya cajalad fiilo ah ujeedadaas.
Kudar khariidada meesha aad ku talo jirtid inaad ku rakibtid valinka. Haddii cidhifyadu ay ku habboon yihiin daloolka, ka dibna qaado feyl iyo xajmiga geesaha.
Waxaad soo iibsataa midab khafiif ah. Daboolka dhismaha, ama ku rinjiye rinjiga caadiga ah. Tani waxay ka ilaalin doontaa waxyaabaha ka soo jeeda deegaanka.
Marka jirku diyaar yahay, xaji polycarbonate. Si taxaddar leh u xoqaya qaybaha xaashida ka muuqata muuqaalada qaab-dhismeedka.
Qaado shaanbadeey ama cajalad leh. Si taxadar leh u dabool dhamaan kala-guurka. Si taxadar leh u ilaali geeska hoose ee dhismaha. Haddii aad rabto, ku dheji cidhbaha wareegyada yaryar.
Ku dheji xididada oo gawaarida xejistaha ku dheji, taas oo noqon doonta quful.
Ku rakib daloolka.
Way fududahay in la naqshadeeyo oo lagu rakibo dariishada aqalka dhirta lagu koriyo. Iyada oo gacan laga geysto gawaarida, waxaad ku kicin kartaa aqalka dhirta lagu koriyo wakhti kasta marka loo baahdo.
Oo halkan waa fiidiyoo ku saabsan sida loo sameeyo daaqada aqalka dhirta lagu koriyo ee gacmahaaga.
Fiidiyowkani wuxuu ka hadlayaa miisaaniyadda miisaaniyadda aqalka dhirta lagu koriyo ee daaqada saqafka.